Gbakọọ olu nke na-egbu osisi
Họrọ mbụ data maka na ngụkọta oge nke
Number iberibe N
Buru ibu kwa cubic mita E
Ndị na-eri nke 1 cubic mita
Ngụkọta oge nke sawn osisi
W - Obosara nke osisi
H - Board ọkpụrụkpụ
L - Na ogologo nke osisi
N - Number iberibe
E - Buru ibu kwa cubic mita
Ọtụtụ ndị na-ewu gị ụlọ gị ma ọ bụ baths okosobode mkpa gbakọọ ego ole osisi a chọrọ maka ọrụ ahụ. Kpebisie ike na otú ihe ị chọrọ ma ọ bụ mbadamba ibé, dị mfe. Ma price nke osisi a na-emekarị gosiri kwa cubic mita, na a na ikpe na ọ bụ ihe adaba iji a pụrụ iche usoro ihe omume mgbawa. Site na iji anyị na saịtị na ị maara n'ogologo, obosara na ọkpụrụkpụ nke mbadamba, nakwa dị ka ọnụ ọgụgụ ha nke iberibe, ga-enwe ike iji gbakọọ otú ọtụtụ cubic mita osisi gị mkpa na ole ọ ga-eri otu cubic mita ma ọ bụ otu osisi.
Osisi na-otú a na-akpọ ha n'ihi na ha e nwetara site sawing a osisi ogwe. Etinyere osisi maka ewu, ngwá ụlọ, nkwakọ iche iche ndị ọzọ na ngwaahịa. Taa, a na ụdị ụlọ ihe bụ ihe kasị ewu ewu. Osisi mbadamba mere si nke bụ ihe magburu onwe-egbochi ihe onwunwe, na-akwado mụ iru mmiri na-achọ ọ pụrụ iche ọgwụgwọ na-elekọta, nke na-eme ka ya karịsịa adaba.
Ọ bụ sawn osisi, ihu mbadamba, edging osisi, na-ewu okporo ígwè. Bruce bụ a osisi, esichara si n'akụkụ niile. Dị ka ọ na-ebipụ a square ma ọ bụ akụkụ anọ cross ngalaba. Kacha nkịtị osisi na-eji na-ewu ụlọ, ebe ịsa na owuwu yitewere.
Ịcha osisi bụ a vasatail osisi na-arụsi ọrụ ike na-eji na-ewu ọrụ n'èzí ụlọ, na imewe nke ime ohere. Ịcha osisi na ngalaba bụ ogologo rektangulu. Edging osisi si dị iche na ịkpụ mere na n'ọnụ na-agaghị ebipụ ya, ọ na-anọgide na-ahụ anya oyi akwa nke n'ụgbụgbọ osisi ahụ a osisi e ebipụ. Ewu okporo ígwè ma ọ bụ mmanya bụ ịṅụ mmanya, a nta cross-ngalaba karịa nkịtị, na na ọtụtụ-eji na-ewu.
Planks ịdị iche site na ụdị osisi, nke na-mere nke. Ha na-eme ka ha si coniferous osisi dị ka pine, spruce na larch. Ma hardwood dị ka oak na beech, birch, Aspen.
Ịmata Ọdịiche osisi dị ka mma ka iru mmiri. Ha na-ekewa raw na iru mmiri n'elu 22 percent na akọrọ na iru mmiri n'okpuru 22 percent. Mbụ ji mee ihe maka ọrụ owuwu, na nke abụọ maka imewe nke ngwá ụlọ.
Ọzọkwa ịmata ọtụtụ iche nke osisi. Oke nke iche na-adabere na ngwa. Ya mere, n'ihi na ngwá ụlọ na-eji kachasi ọkwa ihe. Joinery na kpụrụ ngwaahịa adabara osisi ọkwa 1 na ọkwa 2 na 3 na-eji nanị dị ka a na-ewu osisi.
Ndụmọdụ na nchekwa
Sawn osisi, ma ọ bụrụ na ha na-agaghị na-eji ruo ogologo oge, a ga-echebe site mmiri. Nke a nwere ike ime ka ha na-arịa ọrịa. Ọ na-atụ aro ka ụlọ ahịa na-egbu osisi, stacked n'elu nke ọ bụla ọzọ. N'etiti n'ígwé nke mbadamba ma ọ bụ planks ga-nweta akwa nhicha.